Ọ dị mma ikpochapụ TPM? - Ajụjụ
Isi > Ajụjụ > American megatrends tpm - Akwụkwọ ntuziaka zuru ezu
American megatrends tpm - Akwụkwọ ntuziaka zuru ezu
Ọ dị mma ikpochapụ TPM?
IhichapuTPMnwere ike ibute nfu data. IhichapuTPMeme ka ị ghara ida niile kere igodo metụtara naTPM, na data ejiri igodo ndị ahụ chekwaa, dịka kaadị smart smart ma ọ bụ PIN nbanye. Dị njikere na ị nwere nkwado ndabere na mpaghara mgbake maka data ọ bụla echedoro ma ọ bụ ezoro ezo site naTPM.Sep 11 2018
Ekwesịrị m pịa F12 iji kpochapụ TPM?
Amụma:Ihichahichapụ ozi echekwara naTPM: You ga-atụfu niile kere igodo na ohere data ezoro ezo site ndị eme.Pịa F12 iji kpochapụ TPM. Naanị họrọF12gaba n'ihu na ihicha draịva ma ọ bụ ESC ịjụ mgbanwe mgbanwe a ma gaa n'ihu.
TPM na-anọchi anya Modul Tụkwasịrị Obi na Mgbapụ TPM bụ ọrụ nchekwa echekwara nke na-agafe karịa sọftụwia nchedo nkịtị.
Emere ya iji melite nchebe ma nwee ike inyere Dell kọmputa gị aka ịrụ ọrụ nke ọma. Nnọọ ole na ole usoro nwere TPM technology arụnyere na ha motherboard. Latitude, E-Series, Optiplex, Precision Mobiles, XPS & AW, Vistro & Venue - Lee Nkọwa maka ndepụta zuru ezu nke nkọwa ihe atụ - TPM 2.0 chọrọ BIOS ka etinye ya na UEFI karịa Legkpụrụ, na Windows ga-abụ 64-bit.
Gaa na Ngwaọrụ Ngwaọrụ na n'okpuru Ngwaọrụ nchekwa hụ ma TPM dị ma ọ bụ na ọ bụghị. Ọ bụrụ na ọ dị, pịa igodo Windows na igodo R. Nke a ga-emepe windo ozugbo wee pịnye 'tpm.
msc 'wee pịa OK. Na njikwa njikwa TPM, nyochaa na ọkwa dị njikere iji ya. Ọ bụrụ na TPM apụtaghị na njikwa ngwaọrụ ma ọ bụ ọnọdụ adịghị 'njikere' na njikwa njikwa TPM, mee ihe ndị a: Malitegharịa ekwentị ahụ wee pịa igodo F2 na akara ngosi Dell / Home Screen iji banye Ntọala Ntọala, pịa Security na na Ntọala menu, wee pịa nhọrọ TPM 1.2 Nche ma ọ bụ nhọrọ TPM 2.0 Nche na menu Nche.
Ọ bụrụ na ngalaba TPM na-efu na BIOS, lelee usoro Dell gị n'ihi na enwere ike ịnye iwu na PC gị nwere nkwarụ TPM. Na-esote, gbaa mbọ hụ na ma TPM Gbanye ma gbanye / gbanye. Gbalia ihu na Atestation Enable na Key Storage Enable na-enyere maka nke a ka ọ bụrụ ọrụ TPM ziri ezi.
Ugbu a, laghachi na Ngwaọrụ Njikwa ka ị hụ ma TPM nọ ebe ahụ. Ọ bụrụ na ọ meghị, ị ga-ehichapụ TPM ma melite ya na ngwa TPM kachasị ọhụrụ. Pịa igodo Windows wee pịnye 'powershell' n'ime igbe ọchụchọ.
Right pịa PowerShell ma họrọ Gbaa dị ka onye nchịkwa. Next, pịnye ndị na-esonụ PowerShell iwu: 'gbanyụọ-tpmautoprovisioning' na pịa Tinye. Kwenye nsonaazụ nke AutoProvisioning dị ka 'agbanyụọla'.
Ugbu a pịa igodo Windows + igodo R ọzọ wee banye iwu 'tpm.' a .msc 'ozo.
Oge a na Họrọ Clear TPM site na Omume pane na aka nri. Malitegharịa ekwentị gị na kọmputa, wee pịa F12 mgbe a kpaliri ịga n'ihu na ikpocha TPM. Mgbe ịmechara ihe a niile, gaa dell.com/support, tinye Mkpado Ọrụ ma ọ bụ jiri nhọrọ PC ịchọpụta ma họrọ Ọkwọ ụgbọala & Ihe nbudata, họrọ sistemụ arụmọrụ ziri ezi, wee họrọ ụdị nchekwa site na menu ọkwọ ụgbọala dị.
Chọọ menu maka Dell TPM 2.0 Firmware Update Utility OR Dell TPM 1.2 Update Utility.
Budata mmelite Dell TPM Ọ bụrụ na TPM ka anaghị ahụ ya na njikwa ngwaọrụ ma ọ bụ ọnọdụ dị na njikwa TPM- njikwa njikwa egosighi dị ka 'ọ dị njikere', kpọtụrụ nkwado teknụzụ Dell ma kọwaa ọnọdụ ahụ ka ha nwee ike inyere gị aka na usoro ọzọ. Nata ozi na njikwa njikwa na TPM dị njikere na 'arụ ọrụ belata' dị njikere maka ojiji. Nke a pụtara na sistemụ ahọpụlarị usoro na-ekpochaghị TPM.
Ya mere, ịkwesịrị ịgbaso usoro iji kpochapụ ma melite ngwa ngwa dịka egosiri na mbụ n'isiokwu a, ma lelee BIOS iji jide n'aka na ntọala TPM ziri ezi. Ọ bụrụ na nsogbu ahụ dịgidere n'oge a, soro usoro ndị a Tupu: Kọwaa TPM Reload Windows Lelee na njikwa njikwa na TPM na-agbanye ma dị njikere maka ojiji. Ọ bụrụ na ị nọgide na-enwe nsogbu ma chọọ enyemaka ọzọ ma ọ bụ ajụjụ, biko kpọtụrụ nkwado anyị na teknụzụ na mgbasa ozi mmekọrịta site na FACEBOOK ma ọ bụ TWITTER.
Lelee nkuzi ndị ọzọ anyị na ọwa a ma ọ bụrụ na isiokwu a masịrị gị, LIKE ya wee bụrụ onye na-ede akwụkwọ taa. Daalụ maka ile anya!
Ekwesịrị m ikpochapụ TPM mgbe m na-ere laptọọpụ?
IhichaiheTPM(Ntụkwasị obi Platform modulresets naTPMna steeti a na-amaghị ama. Ọ bụ ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ị bụn'irenke gilaptọọpụonye ọzọ, yabụ azịza ya bụ mba, ịkwesighidoo anyaiheTPM.4 kpebie. 2017
Gịnị bụ TPM kọmputa?
TPM(Ntụkwasị obi Platform modul) bụkọmputamgbawa (microcontroller) nke nwere ike ịchekwa ihe nrụpụta ejiri iji gosipụta ikpo okwu (PC ma ọ bụ laptọọpụ gị).
Okwu a bụ Windows 10 dị elu nke nwere Module Tụkwasịrị Obi Platform TPM bụ isi nkuku nke usoro nchekwa nchekwa Windows niile, gụnyere Windows 10 Hi, Abụ m Lowell Vanderpool.
N'ezie geek, M na-akụzi teknụzụ ihe karịrị afọ 34. Na m hụrụ n'anya ịkọrọ ndị IT obodo ịghọta na Windows 10 nche bụ nke dị oké mkpa dị mkpa na-eto eto ndepụta nke vector ọgụ si bootkits rootkitskeystroke harvison ọtụtụ obi CodeBotnet koodu ransomware na na na na na n'ezie na-emetụta dum Windows 10 Mgbakọ gburugburu ebe obibi na-ewetara gị na azụmahịa gị nnukwu usoro nchekwa nke bụ nnukwu mmelite na nchedo Akụkụ ọ bụla nke ịgbakọ taa na-enwe mmetụta na nchekwa na nchekwa na-arịgo elu Cogwọ nke Cybercrime Na-arị elu May Nwere Ike Malhụ Mwakpo Mgbasa Ozi Malware Na-agọnahụ Ọrụ nke Obi Ọjọọ ihe ndị a nwere mmetụta dị ukwuu na ndị mmadụ n'otu n'otu na azụmaahịa, ihe ka ukwuu n'ihe ekpuchi ebe a gụnyere Windows 10 Server 2016 na Server 2019, yana atụmatụ nchekwa Windows nke etinyegoro na Windows 10 ugbu a karịa ya niile anyị nwere. hụrụ na mbụ mbụ nke Windows Ya mere, gịnị bụ TPM? TPM bu ezigbo ihe nhazi crypto.
Nke a bụ ihe atụ na Asus, nke a bụ modulu ị nwere ike ịzụta ma tinye n'ime motherboard Asus gị, ọ ga-agbakwunye ihe TPM na motherboard gị, nke a bụ ụdị TPM sitere na ihe nkesa, nke a bụ motherboard HP, na gị pụrụ ịhụ modul na ị bụ nwere ike ikwunye ya na-enye gị ikike TPM M ga-asị na ọtụtụ sava-eme taa. A na-etinye nke a n'ime, ọ dịghị mkpa ịgbakwunye modul, nke a bụ ihe atụ nke mgbawa Google Pixel atọ TPM ma ị nwere ike ịhụ ya ma e jiri ya tụnyere dime. Laghachi na ajụjụ anyị gịnị bụ TPM? Ọ bụ ihe nchekwa echekwara echekwa, ọ na - emepụta, ụlọ ahịa ma na - egbochi iji igodo cryptographic, TPMS nwere ọtụtụ usoro nchebe nke anụ ahụ iji mee ka ha nwee akaebe, ha na - abụkarị mkpụrụ osisi na - agbanye na kọmpụta ma ọ bụ na sava sava, mana yana TPM mbipute 2.0 ọ mere ụdị ọhụụ ọ bụla enwere ike Wzọ mmejuputa TPM Anyị nwere ike mejuputa ya na chipset Anyị nwere ike iwekota ya na sistemụ mgbawa dị ka AMD Rison Pro site na ogwe akaSOC CPUs ugbu a nwere TPM wuru n'ime CPU Anyị nwere ike iji sọftụwia TPMS ugbu a naanị ihe ngwọta na-arụ ọrụ na gburugburu ogbugbu kwesiri ntụkwasị obi maka CPUs na ngwa ngwa na-agba ọsọ TPMS na-eme TPM nke mbụ, ka m gwa gị na ha gbagwojuru anya.
Ana m eme ka mkparịta ụka a nke TPM dị mfe. Ha dị mgbagwoju anya, mana ụfọdụ n'ime ihe ndị bụ isi bụ ihe ndị dị ka ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ na -emepụta igodo cryptographic, nke a na-echekwa igodo mkpuchi ma ha nwere ike ime nhicha, ị na-arụ ọrụ dị ka ebe nyocha dịpụrụ adịpụ, ihe dị mkpa na mmejuputa TPMTPMS taa. efu efu dị ka ngwaike - plementmepụta nyiwe Basic siri ike Security TPMS bụ anyị isi a Behind na Tụkwasịrị Obi Platform Module bụ Trusted Computing Group na Alliance of Companies Academic Institutes Njikọ a na otu bụ maka ihe niile na-eme na Tụkwasịrị Obi Platform ou nwere ike ịhụ onye ahụ so na ụlọ ọrụThe TCG Alliance na-enye ụkpụrụ ụlọ A haziri na mmejuputa nke niile TPM ngwaahịa Gịnị mere TPM nnọọ mkpa TPM nwere ike ichebe njirimara gị Ọ nwere ike ịkwado sistemụ arụmọrụ gị Ọ nwere ike ibido ịlaghachi na steeti mara mma Ọ nwere ike ịbụ ihe nchekwa - ma nye atọ -mmepụta nyocha. Ọ nwere ike inye nchekwa echekwara Ọ nwere ike belata oke ibu ụtụ gị nke Googlebook Chromebook na-eji ụkpụrụ TPMS hash iji kwado izi ezi nke buut na faịlụ sistemụ You ga - ahụ site na ihe atụ a otu anyị si agbanye Chromebook, njiri mara ngwa ngwa ngwa ngwa yana tụọ ndị Ihe sistemụ na-atụ anya, ọ bụrụ na ha ezughi atụmanya, enwere ike weghachite ya na ezigbo akwụkwọ.
Nke a bụ ihe kpatara Chromebooks ji wulite aha ọma maka nchekwa, Juniper Netwọk na-enye ohere ka ndị na-agagharị agagharị iji TPM na ụkpụrụ hash iji nyochaa nkwalite kwesịrị ekwesị. Anyị na-amalite ajọ mbunobi ahụ, mgbe ahụ anyị nwere ike ịlele TPM wee tụọ ụkpụrụ hash nke ama ama. Ezi echiche: Mebie echiche ahụ na-agbanye bootloader maka ihe oyiyi Junos.
A na-atụle uru echekwara nke ihe ga-adị ebe ahụ ma ọbụlagodi na kernel na-agba ọsọ ọzọ, anyị nwere ike iji ya tụnyere ezigbo uru amaara nke ọma ka oge ọ bụla router na-ada. Anyị maara na eserese ahụ ziri ezi Ihe a niile na-ewere ọnọdụ site na iji TPM n'ihi na TPM mmejuputa na-abụkarị mgbawa dị iche iche na motherboard ma ọ bụ ngwaọrụ Ọ ga-abụrịrị TPMS na-eguzogide ọgwụ nwere nchekwa na-arụ ọrụ n'ofe mgbawa ahụ niile Ncheta na-internally ezoro ezo randomized mgbakọ na mwepụ arụmọrụ esịtidem nkwụnye nlele nke steeti na-egbochi ikewapụ iche iche busbars dị n'ime na na na na na na na na na na na na ndị a na-obi tara mmiri nke na-enye obi ike nke ụzọ Omenala, TPMS bụ ọtụtụ ibe na-ere n'ime motherboard kọmputa, nke a bụ ihe atụ nke a TPM -Chip na nsụgharị TPM kachasị ọhụrụ nke 2.0.
Ugbu a, anyị nwere ike iwekọta TPM, mejuputa ya na ngwaọrụ ndị ọzọ. Nke a bụ motherboard nke m na-egosi ebe a, ọ nwere Intel Z3 90 chipset nke na-etinye Intel's Platform Trust technology, nke bụ TPM 2.0 zuru ezu nke etinyere na chipset.
Ọ bụrụ na ị nwere Intel motherboard, ị nwere ike ịga na Intel's chipset database ma chọpụta na gị chipset na-akwado Intel Platform Trust Technology TPM mbipute. Ọ na-agba ọsọ na ọtụtụ nde ngwaọrụ mkpanaka You nwere ike iji ya taa F TPM na-enye ọrụ ọrụ nyocha abụọ dị ka Google's Authenticator semantics VPI accessMicrosoft's Authenticator, LastPass Authenticator na ọtụtụ ndị ọzọ, Microsoft Hyper-vNdị data data a na-agba ọtụtụ igwe arụmọrụ na ha nwere gafere TPM nwere iji kwado ya. Yabụ enwere ụdị akpọrọ TPM mebere ma ị nwere ike ịhụ ya ebe a na Hyper V VTPM bụ igwe ojii nchekwa nchekwa.
Ọ bụ ihe dị mkpa na Google Cloud platform platform Amazon Web Services Microsoft Azure Rackspace na enwere m ike ịga n'ihu, enwere ụdị abụọ nke TPM 1.2 na 2.0.
Agaghị m abanye n'ime ọdịiche niile dị n'etiti nsụgharị abụọ ahụ, mana isi okwu bụ na TPM 2.0 na-enye ohere dị iche iche ntinye nke modulu ikpo okwu tụkwasịrị obi ma na-enye ahụmịhe na-agbanwe agbanwe. Otu n'ime ike nke TPM bụ nsonye na ntọala ya na nzuzo.
Mike Bond na Peter Land Rock dere ihe omimi banyere TPM na otu o si di mkpa. Jiri nlezianya hụ na onye ọrụ nzuzo TPM mepụtara maka ụdị ngwaike ngwaike niile Ndị na-anya ụgbọelu Aerospace na-agbanwe VPN kọmputa ServersIOT ngwaọrụ Akụrụngwa akụrụngwa Mobile ụlọ Smart ngwaọrụ Medical ngwaọrụ ebe ọ bụla anyị chọrọ ya Basic ntụkwasị obi na ngwaike ngwaike ebe a. Anyị na-ahụ ebe a ihe atụ maka Windows 10 nke na-achọpụta TPM nke dị na motherboard.
Anyị na-ahụ ya na njikwa Ngwaọrụ, anyị ahụla PM ka ọ bụrụ isi nkuku nche maka nyiwe ngwaike. Ugbu a, ka anyị tụgharịa uche anyị na Windows n'elu ikpo okwu
Enwere ụzọ iji gbanyụọ American Megatrends?
Dabere na nne gị na bios. Ọ bụrụ na ị nwere bọọdụ ngwụcha dị elu nke nwere ọtụtụ bios, oge ụfọdụ enwere mgba ọkụ nke ga-agabiga ihuenyo ahụ ma bụrụkwa oghere ma ọ bụ jigharịa ihuenyo tupu windo amalite.
Esi lelee BIOS nke American Megatrends?
Lelee otu esi lelee ederede BIOS maka nkọwa ndị ọzọ. Ọ bụrụ n’ikpebie na ịnwere motherboard AMI, budata AMI Firmware Update Tool (Meghee Window ọhụrụ). Wepụ ihe ndị America Megatrends BIOS Mmelite ịba uru. Gaa na folda AFUWIN (n'okpuru folda nne na nna AMIBIOS), wee gazie folda folda 32-bit ma ọ bụ 64-bit.
Kedu ka ị ga - esi kpochapụ ihu nchacha agba na American Megatrends?
Ugbu a, n'elu buut-elu American Megatrends 'ikwommiri ihuenyo na' Clear TPM 'msg (pịa F12 ma ọ bụ ESC) gbapụta, nnọọ manụ. Enwere ike ịkwụsị ya na igodo ESC, mana si otú a chọọ usoro mgbakwunye a ka ị gaa n'ihu buut.
Enwere ụzọ iji kpochapụ TPM?
N'oge usoro nrụnye ọzọ, msg sitere na American Megatrends gbapụtara ma jụọ ma ọ ga-ehichapụ TPM, yana ịdọ aka na ntị na ọ ga-ehichapụ ihe niile. Pịa F12 ma ọ bụ ESC ka ịga n'ihu. Enwe F12 mana ọ nweghị ihe mere, yabụ ejiri ESC mee ihe. Wụnye n'ihu, ntinye ọ bụla rụpụtara AMI msg, nke m ehichapụ ya na ESC.